Philippe Coutinho oo ku guulaystay abaal-marinta xiddiga bisha ee kooxda Liverpool + Sawirro – Gool FM
(Livepool) 07 Abriil 2016 – Philippe Coutinho ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa kooxda Liverpool bishii Maarso ee aynu ka soo gudubnay, kaddib markii uu soo bandhigay bishaas qaab ciyaareed cajiib ah, isla markaana uu ka cawiyey Reds inay gaartay siddeed dhammaadka Europa League.
Laacibka khadka dhexe ee xulka Brazil iyo kooxda Liverpool Philippe Coutinho ayaa abaal-marinta ku garaacay xiddigaha ay isku kooxda yihiin ee Adam Lallana, Emre Can iyo Roberto Firmino oo dhammaantood bishii Maarso soo badhigay qaab ciyaareed aad u fiicnaa.
Waxa uu Coutinho door wayn oo muuqda ku lahaa in kooxdiisa Liverpool ay isku dar 3-1 kaga soo tallaabsatay Manchester United kulamadii ka kala dhacay garoomada Anfield iyo Old Traffrod ee wareeggii 16-ka Europa League.
Coutinho waxa uu ka dhaliyey Man United gool cajiib ahaa oo uu si shaqsi ah u shaqeystay, goolkaas oo sabab u ahaa in kooxdiisa Liverpool ay Man United garoonkeeda Old Trafford barbaro kula gasho.
"Real Madrid waxa ay isu difaacday sida koox 10-jiro ah"